Imali engenayo | Inhliziyo Galaxy Amasiko (Beijing) Co., Ltd
Ungayibala kanjani imali engenayo yokutshalwa kwe-movie?
(1) Ngemuva kokuthi ifilimu ikhishwe, wonke amarisidi ehhovisi lamabhokisi azorekhodwa ohlelweni lwethikithi elenziwe ngogesi, futhi imininingwane izofingqwa ngokufanayo kwiHhovisi Lesikhwama Esikhethekile Sezimboni Zamafilimu zaseChina. Imininingwane yezibalo zeHhovisi Lesikhwama Esikhethekile isetshenziswe njengesisekelo sokwabiwa kwama-akhawunti phakathi kwamaqembu. Okokuqala, kuzokhokhwa intela yebhizinisi ekhethekile engu-3.3% kanye nesikhwama esikhethekile esingu-5% kuyo yonke imali engenayo yamafilimu. Amaphesenti angama-91.7 asele abhekwe njengehhovisi "lebhokisi elisatshalaliswa" le-movie.
(2) Ebhokisini lehhovisi elingahlukaniswa ngama-akhawunti, ama-cinema azogcina ama-57%, kanti i-China Film Digital izogcina u-1-3% wemali ekhokhwa yi-ejensi yokusabalalisa. I-40-42% esele iya kubakhiqizi nabasabalalisi bamafilimu. Umsabalalisi wefilimu uzokhokhisa amaphesenti ama-5 kuye kwayi-15 ehhovisi lamabhokisi okungelomsabalalisi wefilimu njengemali ejensi yokusabalalisa. Okungukuthi, u-2-6% webhokisi lebhokisi elisabalaliswayo lisetshenziswa njengemali ejensi yokusabalalisa.
(3) Ezimweni eziningi, kusengaphambili okusatshalaliswa kokusakazwa nokusatshalaliswa kwefilimu, uma kunjalo, umthengisi uzokhokhisa u-12-20% wemali yokusabalalisa i-ejensi. izindleko, njll., kuzokhokhiswa imali ephakeme ye-ejensi yokusabalalisa.
(4) Ifomula yamarisidi e-box-office atholwe ngumkhiqizi yile: 1 * (1-0.033-0.05) * 40% * (1-0.1) = 0.33, okuyisabelo somkhiqizi ngaphansi kwezimo ezijwayelekile. ibhokisi lamabhokisi lokugcina lama-RMB ayizigidi eziyi-100 lizothola cishe ama-RMB ayizigidi ezingama-33 ekubuyiselweni kwehhovisi.
Kukhona ifomula elula yokubala:
Inani lokutshalwa kwemali = (Inani lotshalomali) / (izindleko ze-movie)
Inzuzo elindelwe = (Isibikezelo sehhovisi lebhokisi) * 33% * (Ingxenye yokutshalwa kwezimali)
Uma utshala i-100,000.00 RMB, izindleko ze-Movie zingu-100 million RMB, futhi ibhokisi lebhokisi liyibhiliyoni eli-1,
Ngemuva kwalokho ungathola okungenani inani lama-330,000.00 RMB ekugcineni.
Inani lotshalomali ￥ 100,000.00
Isibikezelo sehhovisi lebhokisi ￥ 1,000,000,000.00
Izindleko ze-Movie ￥ 100,000,000.00
Imali okulindelwe = (Isibikezelo sehhovisi lebhokisi) * 33% * (Inani lotshalomali)